Gụọ ihe ndị na Guide nke Wondershare SafeEraser
Ẹkedori The Mmemme
Njirimara 1: iOS Optimizer
Njirimara 2: Space nchekwa
Njirimara 3: Ihichapu Private Data
Njirimara 4: ihichapu ehichapụ faịlụ
Njirimara 5: Ihichapu All Data (iOS)
Njirimara 6: Ihichapu All Data (Android)
1. Mgbe echichi, na-agba ọsọ SafeEraser na kọmputa gị.
2. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ site na eriri USB gị na kọmputa.
3. Ozugbo gị na ngwaọrụ a ghọtara, isi window ga-gbapụta
Na window, ohere nke ọmụma na ngwaọrụ gị nwere ike hụrụ na na ekpe. Na nri n'igbe depụtara 5 na nke gị họrọ:
1 pịa nyak oke ohere na gị iPhone / iPad / iPod aka.
1. Click on iOS Optimzer ke akpan window. The programm wil-egosi gị na i nwere ike-ebuli iOS ngwaọrụ site na usoro data na onye ọrụ data abụọ n'akụkụ na-6 edemede. Họrọ ụfọdụ n'ime ha ma ọ bụ niile dị ruo gị mkpa. Pịa Malite iṅomi button, mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị-akpaghị aka.
2. Mgbe iṅomi zuru ezu, ngụkọta ego nke junk faịlụ ga-egosipụta. Pịa "nzacha na mkpocha" onwe elu ngwaọrụ gị ohere.
Iji hụ na junk faịlụ na-kpochara kpam kpam, na-na ngwaọrụ gị ejikọrọ n'oge dum usoro.
3. Mgbe ọcha okokụre, ị ga-ahụ window ka ndị a:-egosipụta na ohere ọmụma nke ngwaọrụ gị.
Na N'ihi window, ị nwere ike pịa Home ka laghachi isi window ma ọ bụ Rescan ka iṅomi ngwaọrụ gị ọzọ.
Mpikota onu gị iOS ngwaọrụ weghaara photos na mbupụ foto iji naputa nchekwa
1. Click on Space nchekwa ke akpan window. Mgbe ahụ, ị ga-ahụ otú abịakọrọ photos anya dị ka.
Part 1: Photo mpikota onu
1. Ugbu a, ị pụrụ ịhụ windows dị ka n'okpuru. Ọ bụrụ na ị chọrọ mpikota onu foto, pịa mpikota onu na ekpe ihuenyo. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ otú compresed photos anya dị ka.
2. Ugbu a, usoro ihe omume ga iṅomi gị iPhone na-akpaghị aka ịzọpụta ndị ọzọ ohere. Ka SafeEraser iṅomi gị iOS ngwaọrụ gị weghaara photos. Ọ na-ewe sekọnd ole na ole ịrụcha iṅomi.
3. N'oge Doppler N'ihi window, pịa Malite ka SafeEraser mpikota onu a niile photos na ị na-enyocha na gị iOS ngwaọrụ.
4. Mgbe mpikota onu na-okokụre, ị pụrụ ịhụ otú ihe ohere ị na-na na zọpụta ma na nke ugbu a ikike foto gị na-arụ.
The mkpakọ ga-mgbe n'iyi foto gị. -Eme ihe n'eziokwu, e wezụga size, anaghị m ahụ ihe dị iche n'etiti mbụ foto na abịakọrọ photos. Ị nwere ike lelee àgwà nke abịakọrọ photos.
Nkebi nke 2: exporting Photos
1. agba ọsọ na-software na kọmputa gị, Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na eriri USB. Họrọ Export na ị nwere ike ịzọpụta ndị ọzọ ohere na gị ios ngwaọrụ.
2. Mgbe ịgụ isiokwu usoro ihe omume ga-egosi gị niile foto site na ngwaọrụ gị, họrọ ị chọrọ mbupụ si N'ihi. Tupu Malite mbupu, echefula ka a bupu ụzọ na kọmputa gị faịlụ Ọkpụkpọ, otú i nwere ike imeghe ha ka ha chụwa exporting ya.
3. Pịa Malite, na SafeEraser ga-amalite exporting. Chere maka a obere mgbe, usoro a ga-okokụre.
4. Ugbu a, ị nwere ihe ịga nke ọma mbupụ foto na kọmputa. Ọ bụrụ na ị dịghị mkpa ịnọgide na foto na ekwentị mkpanaaka, ị nwere ike ihichapụ ha.
The ebupụ enyere gị aka ịnọgide foto na ebe nchekwa na kọmputa. Wezụga ya, ọ ga-azọpụta ndị ọzọ ohere. Bụ ọ dị nnọọ mfe na oru oma, nri? The SafeEraser nwere ọzọ dị ike ọrụ dị ka ndị na.
Ihichapụ kpam kpam niile onwe data echekwara na ngwaọrụ gị.
1. Pịa ihichapu Private Data na nri nke isi window.
2. Ihe omume ga na-akpaghị aka na-amalite nyochaa na iṅomi data na ngwaọrụ gị.
3. Ozugbo Doppler zuru ezu, ị ga-ahụ niile gị onwe data depụtara na edemede. Ego n'igbe ndị data ụdị ị ga-amasị ihichapu. Pịa ihichapu Ugbu a ka ihichapụ data.
Ị ga-kpaliri pịnye okwu ahụ 'ihichapụ' iji gosi na-adịgide adịgide nhichapụ nke data, wee pịa ihichapu Ugbu a.
Ozugbo data na-ehichapụ, ị ga-ahụ ndị na-esonụ window:
Na-adịgide adịgide nhichapụ nke trashed faịlụ na ngwaọrụ gị.
1. Click on ihichapu ehichapụ faịlụ ke akpan window, na usoro ihe omume ga-amalite mmalite achọpụta na ịgụ isiokwu ndị data na ngwaọrụ gị.
2. Mgbe scanning, ihichapu faịlụ họrọ site na ịpị ihichapu Ugbu a. Ị nwere ike ịhọrọ ụdị nke faịlụ na ị chọrọ ihichapu site n'inyocha igbe n'ihu ya.
Ị ga-kpaliri pịnye okwu ahụ 'ihichapụ' iji gosi na-adịgide adịgide nhichapụ nke data. Tinye 'ihichapụ' na-ịga n'ihu.
3. Ozugbo nhichapụ zuru ezu, window ga-egosipụta 'merie ehichapu'. Mkpa ka ị na-ahụ na ngwaọrụ gị na jikọọ na kọmputa gị n'oge dum usoro.
Cheta na: faịlụ na iTunes ga-akpaghị aka ehichapu huu data bụkwa unrecoverable site iTunes.
Kpamkpam ehichapụkwa onwe onye nile data si ngwaọrụ enweghị dịrị, na-eweghachiri ka ngwaọrụ factory ọnọdụ.
1. Click on ihichapu niile Data ke akpan window.
Tinye 'ihichapụ' n'ịkwado iji na-aga.
2. Mgbe ndị erasing amalite, na-na ngwaọrụ gị ejikọrọ na-echere ruo mgbe usoro zuru ezu.
Ozugbo nhichapụ zuru ezu, ị ga-ahụ dechara ihuenyo:
Kpamkpam ehichapụkwa onwe onye nile data si gam akporo ngwaọrụ enweghị dịrị, weghachi ngwaọrụ factory ọnọdụ.
1. Jikọọ Android ngwaọrụ na kọmputa na eriri USB. Biko nwee USB debugging na gị android ngwaọrụ tupu njikọ. Mgbe ahụ usoro ihe omume window ga-egosipụta dị ka n'okpuru. Pịa na ihichapu niile Data na window. Nke a ga-enyere gị ihichapu niile data na gị android na-adịgide adịgide na-eme ka gị na ngwaọrụ ika ọhụrụ.
2. Tinye "Hichapụ" na window n'ịkwado iji na pịa ihichapu Ugbu a ime na.
3. Mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-amalite erasing data dị ka music, fim, photos, ngwa, na ndị ọzọ na onye data na ngwaọrụ. Usoro a ga-a nkeji ole na ole, na-adabere data nchekwa na ngwaọrụ.
4. Mgbe erasing usoro-agwụ agwụ, biko soro ntụziaka na ngwaọrụ na enweta Factory Data Tọgharia ma ọ bụ Ihichapu ọdịnaya niile na ngwaọrụ na-ehichapụ niile usoro ntọala.